KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Albanian Sign Language American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Odiyifo no bɔɔ mpae sɛ Yehowa nkeka ne ho (1-19)
Onyankopɔn begye ne nkurɔfo a wasra wɔn (13)
M’ahohia mu mpo, medi ahurusi wɔ Yehowa mu (17, 18)
3 Odiyifo Habakuk mpae a ɔbɔɔ no te sɛ awerɛhow nnwom:* 2 O Yehowa, mate wo ho asɛm. O Yehowa, wo nnwuma yɛ me nwonwa; Ma ɛmmra wɔ mfe no mu!* Ma ɛnna adi wɔ mfe no mu.* Basabasayɛ bere no du a, kae na da wo mmɔborɔhunu adi.+ 3 Onyankopɔn fi Teman bae,Na Ɔkronkronni no fi Paran Bepɔw so bae.+ (Sela)* N’anuonyam kataa ɔsoro,+Na n’ayeyi hyɛɛ asaase so ma. 4 Ná Ɔhyerɛn te sɛ owia hann.+ Hann abien pue fii ne nsam bae,Na emu na na n’ahoɔden hyɛ. 5 Nsanyare a edi awu dii n’anim bae,+Na atiridii a ano yɛ den nso dii n’akyi. 6 Ɔtew gyinae, na ɔwosow asaase.+ Ɔhwɛɛ aman no, na ɛmaa wɔn ho popoe.+ Mmepɔw a ɛwɔ hɔ daa no dwiriw gui,Na nkoko a atim hɔ fi tete no bɔɔ wɔn mu ase.+ N’akwan fi teteete. 7 Mihui sɛ amanehunu aba Kusan ntamadan mu. Ntamadan a ɛwɔ Midian asaase so wosowee.+ 8 O Yehowa, nsubɔnten nti anaa,Nsubɔnten na ama w’abufuw redɛw anaa? Ɛpo nti na wo bo afuw?+ Wotenaa w’apɔnkɔ so,+Na wo nteaseɛnam de nkonimdi* bae.+ 9 W’agyan ho da hɔ na ayɛ krado. W’akode* ayɛ krado sɛ ɛbɛyɛ adwuma sɛnea wɔaka ntam no.* (Sela) Wode nsubɔnten paapae asaase mu. 10 Mmepɔw huu wo no, wɔn ho yeraw wɔn.+ Osu tɔɔ kɛse twiw faa asaase no so. Subun de nne kɛse teɛɛm.+ Na ɛmaa ne nsa so kɔɔ soro. 11 Owia ne ɔsram gyinae wɔ wɔn tenabea kokuroo hɔ.+ W’agyan a ɛpa yerɛwyerɛw no twaam;+ Wo peaw hyerɛnee te sɛ anyinam. 12 Wode abufuw bɛfaa asaase so. Na wode abufuw tiatiaa* amanaman no so. 13 Wufii adi sɛ worekogye wo man, sɛ worekogye nea woasra no no. Ɔpanyin* a ɔda ɔbɔnefofi ano no, wububuu no pasaa. Ofi no fapem ho daa hɔ kosii n’atifi.* (Sela) 14 Bere a wotu baa me so sɛ ahum sɛ wɔrebɛbɔ me ahwete no,Wode n’ankasa akode hwirew n’asraafo ti mu. Wɔn ani gyei paa sɛ wɔkɔtɛw baabi tow hyɛɛ ɔbrɛfo so. 15 Wode w’apɔnkɔ faa ɛpo mu;Wode faa nsu pii a ɛrebu fa so mu. 16 Metee no, ehu kaa me,*Na nnyigyei no nti, m’ano popoe; Me nnompe hodwowee,+Na me nan wosowosowee. Nanso mɛyɛ dinn atwɛn ahohia da,+Efisɛ ɛbɛba nkurɔfo a wɔtow hyɛ yɛn so no so. 17 Ebetumi aba sɛ borɔdɔma rengu nhwirenNa bobe rensow aba;Ebetumi aba sɛ wɔrennya hwee mfi ngodua so,Na mfuw remma aduan;Ebetumi aba sɛ nguan bɛsã wɔ nguammuw mu,Na anantwi asã wɔ buw mu; 18 Nanso me de, medi ahurusi wɔ Yehowa mu,Na m’ani agye me nkwagye Nyankopɔn mu.+ 19 Awurade Tumfo Yehowa ne m’ahoɔden;+Ɔbɛma me nan ayɛ sɛ ɔwansan de,Na ɔde me bɛfa beae a ɛwɔ soro.+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “yɛn bere yi mu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “W’agyan.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Wɔaka ntam a ɛfa mmusua no ho no.”
^ Nt., “porow.”
^ Nt., “eti.”
^ Nt., “ne kɔn.”
^ Nt., “me yam hyehyee me.”